Ammaanka Garoonka Diyaaradaha Magaalada Gaalkacyo oo si weyn loo adkeeyay (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Waxaa si weyn loo adkeeyay ammaanka Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Gaalkacyo, iyadoo si aad ah looga feejigan yahay Qalabka Electroniga.
Siciid C/rixmaan Yuusuf( Dhagaweyne) Maareeyaha Garoonka Diyaaradaha C/laahi Yuusuf ee Magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay qalab loo isticmaalo baaritaanada dhanka ammaanka Garoonka in la keenay, iyadoo laga duulaayo xaqiijinta ammaanka.
Wuxuu sheegay dadka gelaayo Garoonka inay maraan dhowr goobood oo lagu baaraayo alaabta ay wataan iyo qofka shaqsiga intaba, waxaana uu tilmaamay in tani ay qayb ka tahay xaqiijinta ammaanka.
“Koontaroolada amniga aad ayaan u badinay ilaa Jaraanjarada Diyaarada laga fuulayo ilaa Albaabka laga soo galaayo qofka wuxuu marayaa ilaa 7 goobood oo Koontarool ah, qof dhibaato wada hadii dadka oo dhan uu soo gudbo qalab baa yaala meesha ugu dambeeya qalabkaasi ayaa qabanaya qofka dhibaatada wada xitaa hadii uu wato waxyaabaha budada ee Qaraxyada loo adeegsado.” Ayuu yiri Maareeya Garoonka Diyaaradaha Gaalkacyo.
Dhawaanahan Garoomada Diyaaradaha Somaliya waxaa si aad ah looga feejigan yahay Computerka (Laptob-ka) oo dhowr mar loo adeegsaday qaraxyo kala duwan oo ka dhacay Garoonka Diyaaradaha Muqdisho iyo Garoonka Diyaaradaha Magaalada Baledweyne.
Maareeyaha Garoonka Diyaaradaha Magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay Bulshada in laga doonaayo ciidamada ammaanka Garoonka inay si wanaagsan u la shaqeeyaa si ammaanka Garoonka uu u noqdo mid la isku haleyn karo.